कोरोनाको कारण पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर जिवनसंगिनी सीता महराको निधन
- नेपाली सन्देश बुधबार, कार्तिक १९, २०७७ , 8.1K जनाले हेर्नुभयो
पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महराकी जिवनसंगिनी सीता महराको निधन भएको छ । कोरोनाको कारण उनको निधन भएको हो । काठमाडौं नर्भिक अस्पतालमा उपचारको क्रममा अाज बिहान साढे ६ बजे आमाको निधन भएको छोरा निर्मल महरा एटमले जानकारी दिएका छन् । केहि दिन पहिले एकाएक गम्भीर विरामी भएपछि उपचारका लागि हेलिकोप्टर मार्फत महराकी जिवनसंगिनी सितालाई काठमाडौं लगिएको थियो ।
एभरेष्ट एरलान्सको हेलिकोप्टर मार्फत घोराहीवाट महरा पत्नि ५९ बर्षीया महरालाई शुक्रवार विहान ९ बजेतिर उपचारका लागि काठमाडौं लगिएको थियो । सीता महरालाई गम्भीर प्रकृतिको निमोनिया भएको र त्यसले गर्दा स्वासप्रश्वासमा समस्या उत्पन्न भएपछि उपचारका लागि हेलिकोप्टर मार्फट काठमाडौं लगिएको थियो । महरा गत निर्वाचनमा दाङको क्षेत्र नं. २ बाट निर्वाचित भएका थिए । उनी दाङमा आउँदा छोराको घरमा बस्दै आएका छन् सीता महराबारे संक्षिप्त चिनारी
सीता महरा वि.सं. २०१८ साउन १३ गते शुक्रबार बुवा मुक्तबहादुर थापा र आमा खिर्मादेवी थापाको कोखबाट रोल्पाको गजुल धौलेगाउँमा पहिलो सन्तानको रुपमा जन्मिएकी थिइन्।
कृष्णबहादुर महरासँगै २०३५ सालमा विवाह भएको थियो। उनका दुई छोरा र दुई छोरी रहेका छन्। महरा भूमिगत भएपछि तत्कालीन राज्यले धेरैपटक शारिरीक मानसिक यातना दिनुका साथै केही दिन हिरासतमा पनि लिएको थियो।
२०५४ साउन २९ गते राती रोल्पा मेबाङ स्थित घरमै आएर नाबालक छोराछोरीलाई घरमा थुनेर गिरप्तार गर्न थालेपछि उनी प्रहरीको घेरा तोड्न सफल हुनुभएको थियो। त्यसपछि घरभित्र थुनिएका छोराछोरी पनि घरपछाडिको ढोकाबाट भागेर बाँचेका थिए। त्यहीँ दिनदेखि घर छोडेका महरा परिवार नै पूर्णकालीन कार्यकर्ताको रुपमा जनयुद्धमा सहभागी भएका थिए।
गएको दशैंमा पुख्र्यौंली घर रोल्पा मेबाङ गएको बेला स्वास्थ्यमा सामान्य समस्या देखिएपछि उनलाई कार्तिक १३ गते दाङस्थित गोर्खा अस्पतालमा भर्ना गरिएको थियो। निमोनिया र स्वासप्रश्वासको समस्या देखिएपछि कार्तिक १४ गते शुक्रबार हेलिकोप्टरबाट काठमाडौं ल्याई नर्भिक हस्पिटलमा भर्ना गरिएको थियो।
नर्भिक हस्पिटलमा पीसीआर टेष्ट गर्दा कोरोना पोजेटिभ देखिएको थियो। १५ गतेदेखि भेन्टिलेटरमा राखेर उपचार गर्ने क्रममै बुधबार आज बिहान ६:२५ बजे निधन भएको अस्पतालले पुष्टि गरेको छ। सीता महरा माइस्थेनिया नामक रोगबाट विगत १० वर्षदेखि पीडित थिइन् ।